Gaadiid qaraxyo sida oo lasheegay inay ku jira Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Gaadiid qaraxyo sida oo lasheegay inay ku jira Muqdisho
Shacabka Muqdisho ayaa durba cabsi ka muujiyay war ka soo baxay Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya oo ku aadan in Gawaari Qaraxyo ay ka buuxaan ay ku jiraan magaalada Muqdisho kuwaasi oo loo ekeeysiiyay mid ka mid ah shirkadaha ka howlgala Muqdisho.
War qoraal ah oo ka soo baxay shirka Golaha Wasiirada ee Maanta oo uu akhrinayay siihayaha Xilka Wasiirka Warfaafinta ahna Wasiir ku xigeenka Wasaaradaas ayaa lagu sheegay in muqdisho ay ku jiraan Gawaari loo ekeysiiyay kuwa Shirkadda Basaska Sahal kuwaas oo qaraxyo sida.
Wasaaradda Amniga ayaa shacabka Muqdisho iney ka feejignaadaan Gawaaridaasi Qaraxyada ka buuxaan laamaha amaankana la soo socodsiiyaan wixii amaanka wax u dhimayo ay arkaan.
Dad goob joogayaal ah ayaa inoo sheegay in meelaha Qaar ee la isugu yimaadaan dadka ka kala tagaayn,islamarkaana shacabka dhegta isugu sheegayaan in gaadiid Qaraxyo ah magaalada Muqdisho.
Wadada Maka Almukarama oo ah meesha ugu mashquulka badan ganacsiga Muqdisho maqaayado dhowr ahna ku yaalaan oo dadka isugu yimaadaan ayaa galabta lagu arkayaa dad yar oo teel teel u fadhiya,sidoo kale laamaha amaanka ayaa diidaya in gaadiid la dhigto wadada dhinaceeda ama goobaha dadka isugu yimaadaan.
Warkaan ka soo baxay Wasaaradda Amniga ayaa ah kii ugu horeeyay oo ay ka sheegto Shirka Golaha Wasiirada kaas oo ah in ay Muqdisho ku jiraan Gawaari qaraxyo ay ku raran yihiin.